Rasaasa News – Shacabka Degaanka Somalida Ogadeniya oo Cuntadii UNWFP, Siin Jirtay la Joojinayo
Shacabka Degaanka Somalida Ogadeniya oo Cuntadii UNWFP, Siin Jirtay la Joojinayo
on March 20, 2014 4:00 pm
Jijiga, March 20, 2014 – Wararka ka imanay ISI, waxay sheegayaan in raashinka cawiimada ah ee UN-tu siin jirtay dadka ku nool degaanka Somalida, in haatan loogu badalayo lacag mudo kooban.
Sida laga soo xigtay madaxa xafiiska ka hortaga masiibooyinka ee Ismaamulka Somalida Itobiya [ISI] Maxamed Faatax Maxamed, waxaa laga bilaabay afar degmo oo ay ku jirto Jijiga qorshe Tijaabo ah oo lacag loogu badali cuntada la siiyo shacabka. Qorshahan oo ay la timid WFP ayaa ah in shacabka degaanka la siiyo lacag ku filan oo ay ku shaqaysan karaan si looga joojiyo quudintii WFP.
Hadaba, sida la sheegay Atobiya ayaa qorshaheeda dhaxda kaga darsatay kan WFP, kaas oo ay ku doonayso in ay qayb ka hesho lacagta loogu talo galay shacabka ay WFP quudiso.
Madaxa masiibooyinka Faatax, ayaa sheegay in qorshahan tijaabada ah laga bilaabayo afar degmo oo ay ku jirto Jijiga, kaas oo socon doona afar billod, hadii uu guulaystana la gaadhsiin doono dhamaan 68 degmo ee uu ka kooban yahay degaanka Somalida.
Laga bilaabo sanadkii 2007, oo ahaa xiligii ay Atobiya bilowday gumaadka, magaalo gubida iyo baro kicinta shacabka Somalida Ogadeeniya, ayay Hayyada Qaramada Midoobay u qaabilsan la socodka cuntada ee loo yaqaan [WFP], bilowday in ay quudiso shacabka degaanka miyi iyo magaalaba. Ka dib kolkii ay Qaramada midoobay cadaysay in aan Atobiya lagu aamini karin shacabka Somalida Ogadeeniya, waxaana la go,aamiyey in la biilo shacabka degaanka Somalida ee hoos jooga Atobiya.
Sidaasna waxay shacabka degaanka Somalida Ogadeeniya kaga samreen tabca Beereed iyo dhaqasho Xoolo miyi, waxayna ku xoonsan yihiin magaalooyinka waawayn, dadka reer miyiga ahna waxay isugu soo urureen degmooyinka iyo tuulooyinka si ay u helaan Qamandida WFP bixiso bil walba.
Qorshaha WFP, ayaa ah in la siinayo qoyskiiba US$10,000 ee lacagta Maraykanka oo u dhiganta [190,000 Birrta Atobiya], si ay ugu shaqaystaan, Beer tabcadaan ama xoogaa Xoolo ah ugu iibsadaan, ka dibna lagana gooyo cuntadii la siin jiray, hadii uu qorshuhu hirgalo.
Qorshaha Atobiya ayaa ah in mudo afar bilood ah qoyskiiba la siiyo 2,500 Birta Atobiya [2500×4 = 10,000 birr], haddii u qorshahaasi u hirgalo waxaa la gaadhsiin 68 degmo. Laakiin haddii qorshaha Atobiya wado socon waayo waxay noqon in WFP, ay sii wado quudinta qorshahana la laabo.
Ujeeddada Atobiya macada, laakiin waxaa loo malaynayaa sida ay noo sheegeen xubno ka tirsan Ismaamulka Jijiga oo ka gaabsaday in la magacaabo, in ayna Atobiya ku faraxsanayn in dadku dib ugu noqdaan degaanadooda, iyada oo ka cabsi qabta in ay faraheeda ka baxaan.
Marar badan waxaan maqalaa warar hafaryo ah, kuwaas oo sheega in degaanka Somalida la horumariyey. Hadaba hadii uu horumar jiro maxaa ku khasbaya WPF in ay quudiso shacabk degaanka Somalida oo dhan miyi iyo magaalaba?